Xaaladda Sudaanta Koofureed oo saaka deggan - BBC News Somali
Xaaladda Sudaanta Koofureed oo saaka deggan
Image caption Kiir iyo Machar ayaa dhawaan ka heshiiyay colaad sokeeyo oo soo jiitantay.
Wararka ugu dambeeya ee ka imaanaya dalka South Sudan ayaa sheegaya in madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir uu ku baaqayo in xaaladda la dejiyo kadib dagaal shalay galab ka dhacay magaalada Juba oo ay ku dhinteen shan askeri.
Kuxigeenkiisa Reik Machar ayaa dalbanaya in baaritaan degdeg ah lagu sameeyo waxa sababay dagaalkaasi.
Ugu yaraan shan askari ayaa dhimatay shalay kaddib markii ay isku dhaceen ciidammo daacad u kala ah madaxwaynaha Suudaanta Koonfureed, Salva Kiir iyo madaxwayne kuxigeenka dalkaas Riek Machar.
Isku dhacaaasi shalay wuxuu ka dhacay magaalada Juba sida uu ku warramay wargayska Sudan Tribune.
Kolonyo ciidammo ah oo daacad u ah Machar ayaa rasaas ku furay bar kontorool oo ay maamulaan ciidammo daacad u ah Kiir, wakaaladda wararka ee AP ayaa sidaas ka soo xigatay Lul Ruai Koang oo ah afhayeenka dawladda Suudaanta Koonfureed.
Wargayska Tribune waxa kale oo uu ku waramay in labada masuul ay wada hadleen ayna ku heshiiyeen in ay la hadlaan taliyeyaasha ciidammadooda si ay u dajiyaan xaaladda oo dagaal uusan ugu sii fidin caasimadda.
Isku dhacyadani waxay yimaadeen kahor xuska shanaad ee maalinta xoriyadda oo loo dabaaldagayo sabtida.
Damaashaadkii rasmiga ahaa ayaa loo baajiyay dhaqaale la’aan